के तपाईंको पिसाब चुहिने त गर्दैन? यसो गर्नुहोस् – Health Post Nepal
के तपाईंको पिसाब चुहिने त गर्दैन? यसो गर्नुहोस्
२०७८ असार १६ गते १९:३६
बढ्दो उमेरसँगै पिसाब चुहिने वा पाल्ने समस्या आम हुने गर्दछ । तर, सबैमा यो समस्या हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । यद्यपी, यो समस्या पुरुषको तुलनामा महिलामा अत्याधिक हुने गर्दछ ।
पिसाब चुहिने केसमा पहिले इन्फेक्सन हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ । इन्फेक्सन होइन भने ओभर याक्ट्रिक ब्लाडर हो भनेर बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ र त्यसैअनुरूप उपचार गर्नुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ पिसाब निथ्रिन नपाईकन पिसाबथैली बन्द हुन पनि सक्छ। जसले गर्दा पिसाब चुहिने समस्या आउँछ।
शल्यक्रिया गर्दा पिसाबथैलीमा चोट लागेमा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । शल्यक्रियाको समयमा पिसाबथैलीवरिपरिका नसा काटिएमा पनि पिसाब चुहिने समस्या हुन्छ।
केही महिलामा पिसाबथैलीभित्र भएको समस्याका कारण पनि हुँदा पिसाब चुहिने समस्या भइरहेको हुन सक्छ । त्यसैगरी, कुनै वेला महिलाले खोक्दा, जुरुक्क उठ्दा, पेटमा भार पर्दा पिसाब आफैँ चुहिने पनि हुन्छ । यस्तो खालको समस्या प्रमुखतया नसासम्बन्धी कारणले हुने गर्छ। यसको उपचारका लागि पाठेघर र पिसाबथैली जाँचेर हेर्नुपर्छ ।
धरैजसोमा पिसाबथैलीलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने सेतो खालको बलियो मासु हुने गर्छ, जसको कमजोरीले गर्दा यस्तो समस्या हुने गर्छ। कमजोरी उमेरका कारणले पनि हुन सक्छ । धेरैपटक सुत्केरी हुँदा पनि पिसाबथैलीलाई अठ्याउने मासु कमजोर बन्न जान्छ । थोरै–थोरै समयको अन्तरालमा बच्चा जन्मिनाले, सुत्केरी भएको समयमा गाह्रो काम गर्नाले आङखस्ने रोगको साथै पिसाब चुहिने समस्या हुन जान्छ।
पिसाब चुहिने छ भने पिसाबथैली एकदमै चाँडो–चाँडो खुम्च्याउने किसिमका खानेकुराको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कागतिपानी, कोकाकोला, कफी, चियाको सेवन गर्दा पिसाब लागेको अनुभव हुँदैन भने पिसाब चुहिने पनि हुँदैन ।
पिसाब फेर्न जाँदा हरेकपटक गनेर जानुपर्छ । कतिबेरसम्म पिसाब रोक्न सकिन्छ, रोक्दै जानुपर्छ । यसले पिसाब चाँडै चुहिनबाट रोक्न मद्दत पुर्याउँछ । पिसाब रोक्ने क्षमता बढाइदिने औषधिको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, २–३ चम्चा दूवोको रसलाई दूधमा मिलाएर दिनको दुई तीन पटक पिउनाले पिसाब पोल्ने समस्या हट्छ। पिसाब राम्रोसँग खुलेर आउँछ। कडाखालको ग्यास्ट्राइटिसमा आयुर्वेद चिकित्सकहरु नियमितरुपमा दूबोको जुस खान सुझाउछन्।